Cali Xaaji Warsame Maxaa godob lagaa tirsanayaa (W/Q Axmed Shiino) – Puntland Voice
Cali Xaaji Warsame Maxaa godob lagaa tirsanayaa (W/Q Axmed Shiino)
November 28, 2013 7:30 am Views: 375
Cinwaanka maqaalka aan qoray waxaan ugu magac daray Caliyow Maxaa godob lagaa tirsanayaa waxaana kaga gol-leeyahay Murashax Cali Xaaji Warsame oo ka mid ah murashixiinta Puntland u taagan kana mid ahaa ragga lagu tuhmayo hagar daamo in ay bulshada reer Puntland u gaysteen waa hore.
Aduunyo waa un harka labadiisa gelin nin waa ku hawlana hagardaamada dadka ayaa maanta u heelan in uu hogaanka dalka ummada qabto, waana wax caqli walba oo fadhiya ama miisaman uusa ka daadageyn.
Puntland sida taariikhda ku qoran waxaa ka dhacay dagaal diimeed dagaalkaas waxaa abaabulkiisa iyo uruurinta dhalinta ka qayb qaatay lahaana mas’uuliyadeeda urur diimeedkii Al-Itixaad, oo Cali Xaaji uu ka ahaa xubin Fir-fircoon marka laga hadlo xaga saraakisha u qaabilsaneyd saadka iyo maaliyada ururka.
ka mid ahaan shiyihii ururka Al-itaax iyo dagaalkii Saliid
Nuur Aaadan Odawa oo ah 76 jir reer Puntland ah ayaa ii sheegay in Cali uu ahaa madaxa dhaqaalaha ee ururkii AL-itaxaad qayabta ka joogtay Puntland sidoo kale waxaa uu ii sheegay in nin ay yirahdo Xasan Timojilec isna uu ahaa madaxa maaliyada Al-itixaad ee Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Murashaxa Cali Xaaji Warsame oo u tartamaya Madaxweyne nimada Puntland ayaa waxaa uu qeyb ka ahaa Dagaalkii aan wali ka go’in qalbiga iyo maskaxda shacabka Puntland ee lagu xasuusto Xasuuqii ugu xumaa ee Puntland ka dhacay, Taariikhda inta la ogyahay ee Sanadkii 1992 June.
Dagaalkii Al-Itaxaad ee loogu magac daray Saliida waxaa Hogaaminayay Maxbuus Xasan DaahirAways, dad goob joog u ahaa waqica waqtigaa taagnaa oo aan la xariiray qaarkood qaarna aan ugu tagay guryahooda si aan kaga soo wareysto dhabta jirto iyo ku luglahaanshiyaha dagaalka Saliid Cali Xaaji ayaa ka gaabsaday magacooda in ay xusaan iyagoo sheegay in waqti hore ay ahayd dhacdada.
Laakin waxaan ku wargeliyay in aanan magacooda xusi doonin, muhiimna ay tahay in dadka la xasuusiyo xumaantii loo geystay waa, si ay mar walba kaga digtonaadaan dhibaato uga timaado hogaan xumo ama in dadka la galiyo dhibaatada inta badan Soomaaliya manta ka jirta ee ay Puntland ka badbaaday.
Dhammaan dadka aan la kulmay Cali waxaa ay ku tilmaameen in uu qayb wayn ka ahaa xasuuqii dagaalka Saliid sanadii 1992 bishii June, waa waqti hore laakin ninkii Aabihii ama abtigii ku dhintay wali xasuusta kama aysan go’in, sidoo kale ninkii hanti lahaa ee ku waayay isna wali kama samrin waxaana xusid mudan in mar walba la xusaa ileen taarikhdu waa maguurtee.
Shacabka Puntland maxaa la gudboon
Shacabka Puntland dal iyo dibad way ka dharagsanyihiin taariikhda madoow ee mid ka mid ah murashixiinta u taagan qabashada xilka Puntland uu leeyahay, hadii ninkaas uu kusoo baxo doorashada Puntland waxaa ay noqon hubaal waxaa ay Puntland noqon doontaa hoyga hagardaamada iyo hor-mar la’aanta, waana xaqiiq wax walbana sida ay hadda u socdaan ma noqon doonaan, ammanakana waxaa uu noqon donaa mid faraha ka baxa ileen nin walba dhibtuu geystay baa taagane.
Guntii iyo gaba-gabadii Soomaalida waa dad ehel ah wiil iyo abtigii ah, haddana Soomaalida waa dad ilowshiyo dhow, oo ninkii dhibaateyay dhaqsa ku ilaawa waana ibtilada keentay in mudada intaan la’eg ay dirirta iyo dagal diimeedka gudaha dalka ka sii socdaa.
Xiriirka Damul-Jadiid iyo Cali
cali waa xubin ka mid ah urur diimeedka cusub ee dalka dhabarka ka ritay waayadaan ee la yirahdo Damul-jadiid, waana saaxibka dhow ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waloow illo xog-ogaal ah ay sheegayaan in ay sanadkaan gudahiisa kulmeen Xasan iyo Cali kana wada hadleen sida ugu sahlan ee uu Cali ku soo bixi karo maadama danaha guracan ee ay Dowlada Xasan ka leedahay Puntland socon waysay.
waxaan ka digayaa in dad dalka iyo dadka donayo in ay dano kale ku fushtaan, la garab siiyo laguna caawiyo in ay madax u noqdaan mujtamac meelo badan dagaal kaga furanyahay, waxanaa leeyahay reer Puntland,Naf waliba waxay geesataa loo gor-goriyaa xume iyo samaan.